6 Makiyi Makuru kune Yakabudirira SMS Kushambadzira Campaign | Martech Zone
6 Makiyi Makuru kune Yakabudirira SMS Kushambadzira Campaign
Chishanu, December 8, 2017 Svondo, Zvita 10, 2017 Douglas Karr
Vatengesi vanoramba vachideredza kushanda kwe mameseji (SMS) yemakambani ekushambadzira. Haisi seyakaomesesa senge mafoni ekushandisa uye akavandudzwa nharembozha mawebhusaiti - asi inoshanda zvakanyanya. Kuwana mumwe munhu kunyorera kuburikidza neSMS kuri nyore pane kuita kuti vatore nharembozha yewebhu webhu nekutumira mameseji… uye mitengo yekutendeuka inogona kutokwira!
The Zvikamu zveGreat SMS Kushambadzira Campaign infographic kubva SlickText inosimbisa matanhatu akakosha ekufunga kana uchitumira chero mameseji kushambadzira mushambadziro. Iwo mavara akasimba, ruzivo rwunoitika, uye tinovimba unonakidzwa neruzivo zvakanyanya sekuita kwataita tichiisa pamwechete!
6 Makiyi Makuru eShandiso Inobudirira yeSMS Kushambadzira
Gadzira yakakosha kupihwa - pasina iyo, iwe ucharasikirwa nevanozvinyoresa avo vakupa iwe premium real estate kuvasimudzira kwavari.
Tanga nechipo - kukwezva nekuchengetedza vese vanyoreri nekukasira. Kana ivo vachifunga kuti meseji yako kutambisa nguva, vanozozvinyoresa.
Sanganisira yakananga kufona kune chiito - kuti vanyoreri vako vanogona kuita pachiri, ingave iri kodhi yekubvisa kana yakananga link.
Gadzira pfungwa yekukurumidzira - meseji yako inofanira kutumirwa kana iwe uchida kunyorera kuti upindure nekukasira.
Gadzira iko kupihwa - kutumira mameseji kune yakasarudzika yakavhurika uye shanduko mwero, usatambisa pane zvakajairika zvinopihwa. Ita kuti vanyoreri vako vanzwe sekunge vakakosha.
Taura zita rako rechiratidzo - saka vanyoreri vanoziva kuti ndiani atumira iwo meseji. Haasi munhu wese anoronga nhamba dzese mumahukama avo.
Dhawunirodha SlickText's SMS Kushambadzira Nhungamiro kune mamwe mazano ekuvandudza yako inotevera mameseji mushandirapamwe.
Tags: nhimbe dzekufambisaSMSsms yekudaidzirasms mushandirapamwesms ctasms kushambadzasms chipomameseji kushambadziramamesejikutumira mameseji kufona-ku-chiitomameseji ekutumira mamesejimameseji mameseji ctakutumira mameseji kupihwa
Jamboard: Inoshanda 4K Ratidziro Yakabatanidzwa neGoogle Apps
Kurudyi kusvika ipapo. Kutengesa kweSMS chinhu chausingakwanise kurerutsa kunyangwe munguva idzo. Ndatenda!